Alaeze Eswatini nwetara UNESCO Biosphere Reserve mbụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Alaeze Eswatini nwetara UNESCO Biosphere Reserve mbụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Alaeze Eswatini na-eme emume mbido ya na UNESCO World Network of Biosphere Reserves. Ihe omume UNESCO nke nwoke na Biosphere (MAB) ka tinyela saịtị iri na asatọ na mba iri na abụọ na World Network of Biosphere Reserves, alaeze nke Eswatini esonyela na MAB Network n’afọ a site n’idebe saịtị mbụ ya, Lubombo Biosphere Reserve.
A kwadoro ihe mgbakwunye ọhụrụ a na nzukọ Paris si 17 ruo 21 June nke International Council Council of UNESCO's Man na Biosphere Mmemme, na-eweta ọnụ ọgụgụ nke biosphere na-echekwa na 701 gafee mba 124 gburugburu ụwa.
UNESCO Biosphere nwere ikike ichikota nchekwa iche iche nke ihe dị iche iche na ọrụ mmadụ site na iji ihe okike eme ihe dịka akụkụ nke ebumnuche sara mbara iji ghọta, nwee ekele na ichekwa gburugburu ebe obibi nke ụwa anyị. Nwoke na Biosphere Mmemme bu ihe omumu sayensi nke mba uwa n’iile imeziwanye mmekorita di n’etiti ndi mmadu na gburugburu ebe obibi ha - ebumnuche ịsụ ụzọ n’ime obi mmepe ga-adigide.
Onye isi ndi UNESCO, Audrey Azoulay kwuru si, “O di oke nkpa ka emere ihe maka otutu umu anumanu, maka iketa oke nketa ebe obibi anyi. Mgbe enyochachara ihe esemokwu dị na ya, gosipụtara site na akụkọ na-adịbeghị anya nke Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), ịdị mkpa nke World Network of Biosphere Reserves na-enye anyị ihe kpatara olile anya. Ebe nchekwa biosphere ọ bụla nke UNESCO bụ ụlọ nyocha na-emeghe elu igwe maka mmepe na-adigide, maka usoro ga-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide, maka ihe ọhụrụ na ezi omume. Ha nwere njikọ ọhụrụ n'etiti ụwa nke sayensị na ntorobịa, n'etiti mmadụ na gburugburu ebe obibi. ”
Lubombo Biosphere Reserve dị na Lubombo Mountain Range, nke mebere mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Eswatini na Mozambique na South Africa. Ọ bụ akụkụ nke Maputoland-Phondoland-Albany Biodiversity Hotspot ma kpuchie hectare 294,020. Ihe ndi ozo di n’ime ya gunyere oke ohia, ala mmiri na savannah. Umu ahihia ndi ohia nke umu ahihia gunyere umu osisi Barleria ohuru dika Lubombo Ironwoods, Lubombo Cycads na ohia Jilobi. Iri iri abụọ n’ime iri asatọ na asatọ na-egbu anụmanụ dị na mpaghara ahụ, enwere ike ịchọta naanị na mpaghara Lubombo. Speciesmụ anụmanụ ndị na-enye anumanu bara ụba na ndoputa gụnyere agụ owuru, White Rhino, Tsessebe, Roan Antelope, Cape Buffalo na Suni. Ọtụtụ ọrụ nchekwa na nlekota oru, yana ọrụ ugbo, ịkọ anụ, ụlọ ọrụ, njem nleta, ụlọ ọrụ azụmahịa na oke ohia na-arụ ọrụ ugbu a.
N'oge a na-amata ma na-aja Eswatini mma maka mbọ nchekwa ya, nke a bụ nku ọzọ dị na okpu mba Africa a na-asụ ụzọ, ebe ọ gara n'ihu na-eme ihe iji chekwaa gburugburu ya mara mma ma dịkwa iche iche, ma na-enye ụmụ amaala ya ohere nwee ọganihu.